? ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ ?
- April 22, 2019 - Thunn
အခုဆိုရင် ရာသီဥတုက အရမ်းပူပြင်းလှပါတယ်။ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်းကြောင့် ရေဓာတ်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ နေမကောင်းခြင်း၊ အပူကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အပူရှပ်ခြင်း စတဲ့ အပူနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နာမကျန်းတာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
? ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးချမ်းအောင် ထားပေးနိုင်တာက ရေပါပဲ။ ရေဆာမနေရင်တောင်မှ ရေကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ခဏ ခဏ သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အခြား အိုင်ယွန်ဖြည့်အချိုရည်တွေဖြစ်တဲ့ (Pocari Sweat, 100plus ) တို့ကိုလည်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
? ရေဓာတ် အဆင့်ကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဆီးရဲ့ အရောင်ရဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်ရိုးအရောင်ထက် ရင့်နေပြီဆိုရင်တော့ ရေဓာတ်လိုအပ်နေပြီဆိုတာ အသေအချာပါ။
? ဆိုဒါစတဲ့ သကြားပါတဲ့ အရည်တွေကို မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ အကယ်၍ သကြားမပါဘူးဆိုရင်တောင်မှပါ။ အရက်ပါဝင်တဲ့၊ သို့ ကဖင်းပါဝင်တဲ့ သောက်စရာတွေ၊ ကော်ဖီတွေ ကိုလည်း မသောက်သုံးသင်ပါဘူး။
?ရေဘူးကို သွားလေရာယူသွားပါ။ ရေဆာတဲ့ အချိန်ထိ စောင့်မနေပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရေဘူးကို အိမ်မှာခဲပြီး အပြင်ရောက်ရင် အရည်ပျော်သွားမှာဖြစ်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ရေသောက်ဖို့ မေ့နေမှာဆိုးရင် ရေသောက်ဖို့သတိပေးတဲ့ application ကို ဒေါင်းထားလိုက်ပါနော်။
? အေးတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားပေးပါ။ အသုပ်တွေ၊ အသီးတွေ၊ အသီးအရွက်တွေကို ရွေးချယ်စားပေးပါ။ အသားနဲ့ ပရိုတိန်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားခြင်းက ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အစားအသောက်တွေကိုလည်း မီးဖို မသုံးပဲ ချက်ပြုတ်တာက အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေတာဖြစ်လို့ ခေတ္တသုံးတာကို ရပ်ထားသင့်ပါတယ်။
☀️ နေအရမ်းပူတဲ့အချိန်မှာ အပြင်မထွက်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် မနက်ပိုင်း (သို့) နေ့လည်ခင်း နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ အပြင်သွားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
? နေပူခံ ခရင်မ် လိမ်းပါ။ နေပူခံ ခရင်မ်က အေးမြစေတဲ့ သက်ရောက်မှု မရှိသော်လည်း ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကိုတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂ နာရီခြား တစ်ခါလောက်ခြား ခြားလိမ်းပေးပါ။
? အရိပ်ရတဲ့ နေရာမှာနေပါ။
? ရေနည်းနည်း ဖြန်းပေးပါ။ စပရေး ပုလင်းထဲကို ရေသန့်ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး ပူတဲ့ အချိန် မျက်နှာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြန်းပေးတာက သင့်ကို အလျင်အမြန် အေးမြစေမှာပါ။
?? ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ် ဝတ်သင့်ပါတယ်။
??? ဦးထုပ် (သို့) ထီးဆောင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
? ဖိနပ်ကိုလည်း သက်တောင့်သက်တာရှိမယ့် ဟာမျိုး ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်ပါ။
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအချို့ကို တင်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ သူငယ်ချင်းအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ သင့် အသိမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဒီ post ကို share ရင်း အသိပေးပြီး ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီကို အံတုနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
? ပူပွငျးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ဘယျလိုနထေိုငျကွမလဲ ?
အခုဆိုရငျ ရာသီဥတုက အရမျးပူပွငျးလှပါတယျ။ ရာသီဥတု ပူပွငျးခွငျးကွောငျ့ ရဓောတျကုနျခမျးခွငျး၊ နမေကောငျးခွငျး၊ အပူကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုဖွဈခွငျး၊ မောပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ အပူရှပျခွငျး စတဲ့ အပူနဲ့ ဆကျစပျပွီး နာမကနျြးတာတှေ ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ပူပွငျးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အပူဒဏျကို အံတုပွီး ဘယျလိုနကွေမလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
? ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီမှာ ခန်ဓာကိုယျကို အေးခမျြးအောငျ ထားပေးနိုငျတာက ရပေါပဲ။ ရဆောမနရေငျတောငျမှ ရကေို ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ခဏ ခဏ သောကျသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ အခွား အိုငျယှနျဖွညျ့အခြိုရညျတှဖွေဈတဲ့ (Pocari Sweat, 100plus ) တို့ကိုလညျး သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။
? ရဓောတျ အဆငျ့ကို တိုငျးတာနိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက ဆီးရဲ့ အရောငျရဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ကောကျရိုးအရောငျထကျ ရငျ့နပွေီဆိုရငျတော့ ရဓောတျလိုအပျနပွေီဆိုတာ အသအေခြာပါ။
? ဆိုဒါစတဲ့ သကွားပါတဲ့ အရညျတှကေို မသောကျသုံးသငျ့ပါဘူး။ အကယျ၍ သကွားမပါဘူးဆိုရငျတောငျမှပါ။ အရကျပါဝငျတဲ့၊ သို့ ကဖငျးပါဝငျတဲ့ သောကျစရာတှေ၊ ကျောဖီတှေ ကိုလညျး မသောကျသုံးသငျပါဘူး။
?ရဘေူးကို သှားလရောယူသှားပါ။ ရဆောတဲ့ အခြိနျထိ စောငျ့မနပေါနဲ့။ ဖွဈနိုငျရငျ ရဘေူးကို အိမျမှာခဲပွီး အပွငျရောကျရငျ အရညျပြျောသှားမှာဖွဈလို့ အဆငျပွမှောပါ။ ရသေောကျဖို့ မနေ့မှောဆိုးရငျ ရသေောကျဖို့သတိပေးတဲ့ application ကို ဒေါငျးထားလိုကျပါနျော။
? အေးတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှေးခယျြစားပေးပါ။ အသုပျတှေ၊ အသီးတှေ၊ အသီးအရှကျတှကေို ရှေးခယျြစားပေးပါ။ အသားနဲ့ ပရိုတိနျးတှေ အမြားကွီးပါတဲ့ အစားအစာတှကေို စားခွငျးက ရဓောတျဆုံးရှုံးစပေါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ အစားအသောကျတှကေိုလညျး မီးဖို မသုံးပဲ ခကျြပွုတျတာက အပူခြိနျကို မွငျ့တကျစတောဖွဈလို့ ခတ်ေတသုံးတာကို ရပျထားသငျ့ပါတယျ။
☀️ နအေရမျးပူတဲ့အခြိနျမှာ အပွငျမထှကျပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျရငျ မနကျပိုငျး (သို့) နလေ့ညျခငျး နောကျပိုငျးအခြိနျတှမှော အပွငျသှားတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
? နပေူခံ ခရငျမျ လိမျးပါ။ နပေူခံ ခရငျမျက အေးမွစတေဲ့ သကျရောကျမှု မရှိသျောလညျး ပူပွငျးတဲ့နရေောငျကိုတော့ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ၂ နာရီခွား တဈခါလောကျခွား ခွားလိမျးပေးပါ။
? အရိပျရတဲ့ နရောမှာနပေါ။
? ရနေညျးနညျး ဖွနျးပေးပါ။ စပရေး ပုလငျးထဲကို ရသေနျ့ထညျ့ပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ပွီး ပူတဲ့ အခြိနျ မကျြနှာ၊ ခန်ဓာကိုယျကို ဖွနျးပေးတာက သငျ့ကို အလငျြအမွနျ အေးမွစမှောပါ။
?? ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတဲ့ အဝတျအစားတှကေို ရှေးခယျြ ဝတျသငျ့ပါတယျ။
??? ဦးထုပျ (သို့) ထီးဆောငျးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
? ဖိနပျကိုလညျး သကျတောငျ့သကျတာရှိမယျ့ ဟာမြိုး ရှေးခယျြ ဝတျဆငျပါ။
ဒါကတော့ သူငယျခငျြးတို့အတှကျ ပူပွငျးတဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုနိုငျမယျ့ နညျးလမျးအခြို့ကို တငျပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးဟာ သူငယျခငျြးအတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒီလို ဆောငျးပါးတှကေို အပတျစဉျဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတေျာ့တို့ရဲ့ Facebook Page ကို Like & See First လုပျထားပေးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ သငျ့ အသိမိတျဆှတှေအေတှကျ ဒီ post ကို share ရငျး အသိပေးပွီး ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီကို အံတုနိုငျဖို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ P (၇) လုံး